‘हिजो आजका कुरा’देखि ‘चुरीफुरी’सम्मको तुलसीको यात्रा
काठमाडौं : सानैदेखि अभिनयमा रुची भएका तुलसी प्रशाद श्रेष्ठ बि.स.२०३६ सालमा काठमाडौंको बसुन्धरामा जन्मिएका हुन् । टेलिसिरियल ‘हिजो आजका कुरा’ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ८० भाग र कान्तिपुर टीभीबाट ५० भागसम्म अभिनय गरेका श्रेष्ठले त्यसपछि ऋषिराज आचार्यको निर्देशनमा बनेको आफन्तमा अभिनय गरेका थिए । जुन २०६३ सालबाट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको थियोे । त्यसपछि उनले टेलीसिरियल सञ्जीवनी, झट्का, विश्वास नामक टेलिसिरयलमा अभिनय गरेका थिए । उनले ती सबै टेलीसिरियलमा नकारात्मक भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । ती मध्ये टेलीसिरियल आफन्तमा उनले गरेको ड्रगिस्ट्को भुमिका अत्यन्तै रुचाइएको थियोे ।
सानो पर्दामा करिब ७ वर्ष अभिनय गरेपछि ठूलो पर्दाको फिल्म मिस्टेक सालमा भिलेनको भूमिकामा अभिनय गरेका श्रेष्ठले पछि ड्रिम गर्लमा पनि मुख्य भिलेनको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । चलचित्र ड्रीम गर्लमा छायांकनका लागि थाइल्याण्डसम्म सुटिङमा गएका कलाकार श्रेष्ठले हाल चुरीफुरी नामक फिल्ममा म्यानपावर सञ्चालकको मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । चलचित्र चुरीफुरी परिस्थिति सामान्य हुनासाथ प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको छ ।
यस्तै अन्जु पन्तको ‘कसरी म चित्त बुझाउँ तिमी भन्छौ संसार अर्कै छ’ बोलको चर्चित गीतको म्युजिक भिडियोमा प्ले ब्वाईको मुख्य भूमिकामा मोडलिङ गरेको छन् भने अन्जु पन्तकै अर्को चर्चित गीत ‘तिमीलाई खुशी पार्न मैले आफ्नो आत्म मारेको थिएँ’ बोलको गीतमा पनि मोडलिङ गरेका छन् ।
उनले नायिका सारिका घिमिरेसँग पनि ‘निस्टुरी है नै डाँडा काटेर’ बोलको गीतमा मोडलिङ गरेका छन् भने आधुनिक गीततर्फ गायक नरेन्द्र प्यासीको ‘बिरानो भो बस्ने बास तिम्ले छोडी दिँदा’ बोलको म्यिुजिक भिडियोमा पनि मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेको छन् ।
कलाकार श्रेष्ठ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक भूमिकामा धेरै चर्चित छन् तर सकारात्मक भूमिकामा पनि चर्चा बटुल्ने गर्छन् । जीवन भरी अभिनय गरिरहने लक्ष्य रहेका श्रेष्ठ ‘यस्तै नसा’ नामक सर्ट फिल्मले मुख्य खलपात्र को अवार्ड पाएका थिए । जीवनभर अभिनय गरेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने उनको उद्देश्य छ ।
उनी चलचित्र ड्रिम गर्लमा टाके दादा अनि छोटो चलचित्र नसामा सानो काजीको भूमिकामा निकै चर्चित भएका थिए । हाल उनले तेस्रो बुस्टर इन्टरटेण्टमेन्ट अवार्डबाट अन्जु पन्तको ‘कसरी म चित्त बुझाउ तिमी भन्छौ संसार अर्कै छ’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोमा बेष्ट एक्टर विधामा अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।
बलबहादुर र अस्मिताको स्वरमा ‘मन कि मन्जरी’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं : बलबहादुर राजबंशी र अस्मिता अधिकारीको स्वरमा रहेको गीत ‘मन कि मन्जरी’ सार्वजनिक भएको छ । बलबहादुरकै संगीत, उदयराज पौडेलको एरेञ्ज र रमेश मास्केको शब्द रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
निकेश खड्काको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा राजकुमार अधिकारी क्षेत्री र गरिमा शर्मालाई फिचरिङ गरिएको छ । बुद्ध थापाको छायांकन रहेको भिडियोमा विकास धमलाको सम्पादन रहेको छ । गीत जति उत्कृष्ट छ गीतको भिडियो पनि त्यतिकै उत्कृट बनेको छ ।
बलबहादुर द भोइस अफ नेपाल सिजन दुईका उत्कृष्ट ९ मा पर्न सफल भएका थिए भने अस्मिता अधिकारी आइडल सिजन दुईको फाइनलिस्ट हुन् ।
बलबहादुरको यसअघि सार्वजनिक गीत ‘जेल पनि सहुँल’लाई स्रोता/दर्शकले अत्यधिक मन पराएका थिए । ‘मेरा अन्य गीत जस्तै यो सार्वजनिक गीतलाई पनि स्रोता/दर्शकले माया गरिदिनेमा आशावादी रहेको छु’, बलबहादुरले भने ।
‘भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाउन शत प्रतिशत मेहनत गर्छु’
विधान कार्की पछिल्लो दशकमा नेपालमा उदाएका म्युजिक भिडियो निर्देशकका रुपमा चिनिन्छन् । उनले सर्ट फिल्म र विज्ञापन पनि निर्देशन गरेका छन् । उनको भिडियोमा नेपाली चलचित्रमा स्थापित कलाकारदेखि भिडियोमा उदाउँदै गरेका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । अमेरिकामा फिल्म मेकिङ पढेका विधानको म्युजिक भिडियोमा प्रगति आफैंमा लोभलाग्दो छ । उनै विधान कार्कीले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
म अहिले म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्ने र त्यसको सम्पादन कार्यमा व्यस्त छु ।
भिडियो निर्देशनमा कसरी आउनुभयो ?
मेरो जन्म कैलालीको टीकापुर नगरपालिका अस्नेहरीमा भएको हो । म कक्षा ८ पढ्दा देखिनै सडक नाटक र स्टेज नाटकहरु लेख्ने र निर्देशन गर्थें । सानैदेखि निर्देशन पेशामा संलग्न भएकाले भविष्यमा पनि निर्देशककै रुपमा आफुलाई अघि बढाउने सपना बोकेर बि.स. २०६३ मा काठमाडौँ आएलगत्तै निर्देशन पेशामा निरन्तर छु ।
तपाईंको समयको भिडियो निर्देशन र अहिलेको भिडियो निर्देशनमा के फरक पाउनुभएको छ ?
आजभन्दा दश वर्षअघि मैले भिडियो निर्देशन गर्दाको समय र अहिले निर्देशन गर्ने समयको कुरा गर्दा भिडियो निर्माण प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । डिजिटल प्रविधिले कामको गुणस्तरलाई उत्कृष्ट बनाएको छ । म्युजिक भिडियो निर्माणले व्यवसायीकरण पाएको छ । भिडियो निर्देशन गर्ने शैलीमा भने केही फरक पाएको छैन ।
भिडियो निर्देशन गर्नुअघिको तयारी कस्तो हुन्छ ?
मैले निर्देशन गर्ने हरेक भिडियोको तयारी पूर्णरुपले गरेको हुन्छु । गीतलाई कपीमा लेख्ने, गीतको भाव बुझ्ने र गीतको अर्थ अनुसार कथा बुन्ने गर्छु । त्यसरी हरेक गीतको कथा तयार भएपछि कलाकार, भिडियो निर्माण टिम र प्राविधिक छनोट गर्छु । मैले निर्देशन गर्ने म्युजिक भिडियोको कथा र पटकथा तयार गरेर मात्रै छायांकन गर्छु । यो सबै गर्दा मलाई कम्तिमा ७ दिन लाग्ने गर्छ ।
एउटा गीतलाई भिडियोमा न्याय दिन निर्देशकलाई कतिको चुनौतीपूर्ण छ ?
मेरो विचारमा हरेक गीतले एउटा छुट्टै चुनौती र अवसर बोकेर आउँछ । एउटा राम्रो गीतलाई भिडियोको माध्यमबाट पर्दामा उत्कृष्ट ढंगले उतार्नु भिडियो निर्देशकको जिम्मेवारी हो । एउटा गीतलाई भिडियोमा न्याय दिन भिडियोमा समावेश हुने कलाकार, त्यसको निर्माण शैली, कथावस्तु, प्राविधिकको काम र निर्देशकको निर्देशन क्षमताले अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । म मेरा भिडियोलाई चुनौती मात्रै नभएर अवसरको रुपमा पनि लिन्छु । हरेक भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाउन शत प्रतिशत मेहनत गर्छु ।
तपाईंले अमेरिकामा फिल्म मेकिङ पढेर आउनुभएको छ । त्यसले भिडियो निर्देशनमा कतिको सहयोग पुगेको छ ?
तपाईं कि त पढेर या त परेर कुनै पनि विषयमा ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ । मेरा लागि अमेरिकामा फिल्म मेकिङ पढ्नु निकै फलदायी भएको छ । मसँग काम गरेको अनुभव र फिल्म मेकिङ सम्बन्धी शिक्षाले जस्तो सुकै काम गर्न सक्ने क्षमतालाई निखारेको छ । फिल्म मेकिङ पढेर आएपछि मलाई भिडियो निर्देशनमा व्यवसायीकरण गर्न सहज भएको छ । म अहिले छोटो समयमा राम्रो काम गर्ने निर्देशक भएको छु । मेरो भिडियो प्रस्तुत गर्ने शैलीमा समेत फरक देखिएको छ ।
तपाईंले ल्याउनु भएका कलाकारहरु अहिले सफल छन्, यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
म पनि कुनै बेला नयाँ थिएँ, जहाँ मलाई अवसरको खोजी थियो । म त्यही दिनलाई सम्झिँदै मेरा म्युजिक भिडियोमा नयाँ कलाकारहरुलाई अवसर दिने गर्छु । मसँग काम गर्ने थुप्रै नवकलाकारहरु अहिले नेपाली सांगीतिक र चलचित्र क्षेत्रमा व्यावसायिकरुपमा सफल हुनुहुन्छ, यो मेरा लागि खुशीको कुरा हो । मैले सिकाएका कुराहरुले उहाँहरुको कलाकारितामा आएको निखार्तामा मलाई गर्व लागेको छ । यो मैले नेपाली म्युजिक भिडियो मेकिङ र सांगीतिक क्षेत्रमा दिएको योगदान हो जस्तो लाग्छ ।
तपाईं नेपालको महँगो पारिश्रमिक लिने भिडियो निर्देशकमा पर्नुहुन्छ नि हो ?
मैले राष्ट्रियस्तरमा पाएको सफलता, परिपक्क निर्देशन क्षमता र हरेक भिडियो निर्देशनमा मैले गर्नुपर्ने मेहनतका कारण म महँगो पारिश्रमिक लिने गर्छु । मैले महँगो पारिश्रमिक लिए बमोजिमको भिडियोको नतिजा दिने गरेको छु । अहिलेसम्म मसँग काम गर्ने भिडियो निर्माताहरुलाई निराश बनाएको छैन ।
सधैंभरी भिडियो निर्देशन नै गरिरहने हो कि फिल्मतिर पनि आउने सोच बनाउनुभएको छ ?
मैले म्युजिक भिडियो निर्देशनबाहेक छोटा चलचित्र, वृतचित्र र टेलिभिजन विज्ञापनको निर्देशन गरेको छु । अब भने गुर्खाज ‘द स्टोरी अफ अ ब्रेवरी’ नामक चलचित्र निर्देशन गर्दैछु । जुन चलचित्रको कथा म र अमेरिकामा बस्ने नेप्सिनेका ग्लोबल सीइओ रायन रेजले लेख्दैछौं । चलचित्रमा नेप्सिने र दक्षिण भारतीय फिल्म कम्पनीको निर्माण रहनेछ भने नेपाली र भारतीय कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ । यसको निर्माणमा भारतबाट प्राविधिक टोली आउने तय भएको छ । अर्को वर्ष छायांकन गरी त्यसको एक वर्ष भित्र ग्लोबल रिलिज गर्ने तयारीमा छौं ।
भिडियो निर्माणमा अवसर र चुनौतीहरु के–के छन् ?
अहिले नेपाली म्युजिक भिडियो निर्माण पेशागतरुपमा व्यवस्थित भैसकेको छ । त्यसकारण अहिले पर्याप्त अवसरहरु छन् । तपाईंको निर्देशकीय क्षमता र पेशाप्रतिको इमान्दारिताले तपाईंलाई अवसरको नजिक लैजान्छ । अहिले भिडियो निर्देशनको प्रतिस्पर्धा भने चुनौतीपूर्ण छ । कम समय र थोरै लागतमा भिडियो निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थाका कारण निर्देशकहरुमा ठुलो चुनौती थपिएको छ ।
समकालीन भिडियो निर्देशकको उपस्थिति बाक्लो छ । यो उपस्थितिमा आफूलाई कतिको प्रतिस्पर्धी मान्नुहुन्छ ?
मसँगै काम गर्ने निर्देशकहरुमध्ये थोरै निर्देशकहरु अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ । धेरै निर्देशकहरुको भिडमा मैले निर्देशन गर्ने शैलीमा भिन्नता छ, जसका कारण नेपालमा मलाई अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा फरक बनाएको छ । मेरो लागि पहिलो प्रतिस्पर्धी म आफैं हो । तर अरुका लागि भने म बलियो प्रतिस्पर्धी हो ।
नेपालमा म्युजिक भिडियोको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
अहिले नेपाली म्युजिक भिडियोको बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत फराकिलो बन्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा म्युजिक भिडियोको भविष्य उज्ज्वल छ । भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईं आफुमा पनि भर पर्छ ।
भिडियोबाट अवार्ड पनि पाउनुभएको होला नि ?
भिडियो निर्देशकको रुपमा अहिलेसम्म मैले आधा दर्जन बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको छु ।
तपाईंका सफल भिडियोहरु ?
‘नबोली नबोली’, ‘काले केटा २’, ‘धर्ति आकाश’, ‘केटो अलि कमाउने होस्’, ‘तिम्रो संसार’, ‘मै राम्री हु कि’, ‘यस्तो माया’ आदि ।
म्युजिक भिडियो निर्देशन यात्रामा सम्झिनै पर्ने व्यक्ति ?
अर्जुन पोखरेल, दीपक शर्मा, महेश खरेल
म मेरो बाँकी जीवन नेपाली सांगीतिक र चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्र निर्देशकको रुपमा समर्पण गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौं : वरिष्ठ हास्य कलाकार शम्भुराज थापा ‘बखते’ को ६४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । शनिबार बिहान उनको पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको हो ।
कोरोना संक्रमित भएपछि थापा दुई साताअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
उनले थुप्रै चलचित्रमा र दर्जनौं टेलीचलचित्रमा अभिनय गरेका छन् थापाले टेलिफिल्म हल्का रमाइलो, गोलमाल, भद्रगोल, मह सञ्चार, मेरीबास्सैमा अभिनय गरेका थिए ।
उनले मह जोडीले निर्माण गरेको ‘मदन बहादुर हरिबहादुर’ मा पनि अभिनय गरेका थिए । थापा चलचित्र ‘आफ्नो बिरानो’ का निर्माता पनि हुन् ।
थापाका श्रीमती, एक छोरी र एक छोरा छन् ।
‘स्रष्टाको काम हो सिर्जना गर्नु, गाउँ र शहर भन्ने हुँदैन’
मोफसलमा रहेर नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा क्रियाशील गायक भुवन प्यासी प्रायःं उपत्यका बाहिर नै भेटिन्छन् । चार दर्जन बढी गीतमा स्वर दिएका गायक भुवन प्यासी आफ्नै गृहजिल्ला चितवनमा रहेर निरन्तर गीतसंगीतमा लागिरहेका छन् । सानैदेखिको गीतसंगीत प्रतिको रुचीले गर्दा आज यो स्थानसम्म पुग्न सफल भुवनले स्थायी बसोबास रहेको भरतपुरकै गौरीगञ्ज मावि र प्रेमबस्ती उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका हुन् । पप, आधुनिक, तीज तथा लोक पप लयमा शब्द, संगीत र स्वर दिँदै आएका उनलाई आधुनिक भाका अलि बढी मनपर्छ । ‘यादहरू’ बोलको आधुनिक गीत स्रोतामाझ पस्केर औपचारिकरूपमा सांगीतिक क्षेत्रमा उपस्थिति जनाएका गायक भुवनले चलचित्र ‘यो पागल मन’, ‘भेटी’ को गीतमा स्वर दिएका छन् । प्रदर्शनमा आउन बाँकी ‘चोर सिपाही’ र ‘कुण्डली’मा पनि उनको स्वर सुन्न सकिन्छ । भुवन प्यासीले नारायणी संगीत विद्यालयबाट तीन वर्ष औपचारिकरूपमा संगीतको प्रशिक्षण पश्चात यस क्षेत्रमा लागेका हुन् । उनी आफैं शब्द कोर्छन्, संगीत सिर्जना गर्छन् र गाउँछन् पनि । भुवनले आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा आधा दर्जन गीत गाएका छन् । भुवनको दर्जनौं गीत स्रोता रुचीका छन्, जसमा लेहेङ्गा हार, माइली, यो देशको लागि, मखमली, हल्का हल्का चुम्न देऊ न काली, ट्राफिक जाम, झम्के झम्के, हे बरै अलिबडी चर्चामा रहे । गायक भुवन विभिन्न पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृतसमेत भएका छन् । उनलाई २०६७ मा आयोजित चितवन महोत्सवमा आधुनिक गायन प्रतियोगितामा ‘सर्वोकृष्ट आधुनिक गायक’ अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो भने कालिका म्युजिक अवार्ड, सगरमाथा म्युजिक अवाड, बक्स अफिस म्युजिक अवार्ड २०७४, नाट्यस्वर म्युजिक अवार्ड लगायतका अवार्डहरूबाट सम्मानित भइसकेका छन् । सांगीतिक कार्यक्रमको क्रममा आधा दर्जन देशहरूको भ्रमण गरिसकेका चर्चित गायक भुवन प्यासीले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ दिनहरु ?
हालै ‘मखमली रातोचोली’ बोलको भिडियो सार्वजनिक गरें । जसमा मलाई स्वरमा एलिना चौहानजीले साथ दिनुभएको छ । कोभिड १९ का कारण अरु बेलाजस्तो गीत, संगीतको कामलाई तिब्रता दिन सकिरहेको छैन । घरतिरै बसिवियालो गर्दैछु ।
कोभिडले गीत संगीतलाई कस्तो असर पारेको छ ?
कोभिड १९ ले गीत, संगीतमा निक्कै असर पु¥याएको छ । पहिलेको जस्तो स्टेज कार्यक्रम छैन । हामी गायक कलाकारहरूलाई जति कार्यक्रमहरू भयो उति राम्रो सिर्जनाका हिसावले पनि अर्को कुरा आयआर्जनको हिसावले नि । कोभिडका कारण कार्यक्रमहरू ठप्प छ । देश तथा विदेशमा हुने सांगीतिक कार्यक्रम ठप्प छ । गीत, संगीतको क्षेत्रमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा असर पारेको छ ।
गीत, संगीतको बजार खुम्चिएको छ आयआर्जन कसरी भैरहेको छ ?
माथि पनि भनें, हामी गायक कलाकारहरुको मुख्य आयश्रोत भनेकै स्टेज प्रोगाम हो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । युट्युब अर्को विकल्प बन्दैछ । कमाई छैन भन्दैमा आफ्नो क्षेत्र छाड्न सकिन्न ।
मोफसलमा रहेर पनि गीत संगीतलाई निरन्तरता दिइरहन मुश्किल छैन ?
आफुले इच्छाएको क्षेत्र भएकोले यसबाट अलग रहन सकिन्न । स्रष्टाको काम हो सिर्जना गर्नु गाउँ र शहर भन्ने हुँदैन, जहाँ बसेर पनि आफ्नो श्रोता, दर्शकहरु माझ आफ्नो सिर्जना पस्किन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
कस्तो खाले गीतहरू गाउन मन लाग्छ ?
मैले सबै प्याटर्नको गीतहरू गाउने गरेको छु । तर, म विशेष गरी आधुनिक गीतमा अलि बढी रमाउने भएकाले आधुनिक नै मन पर्छ ।
गीत संगीत के हो ?
गीत संगीत दुःख सुख साटासाट गर्ने सबैभन्दा नजिकको साथी हो । तपाईं हामी खुशी हुँदा नि गीत नै गाउँछौं, दुःखी हुँदा त झनै गीतको सहारा लिएर मन बुझाउँछौँ । त्यसैले गीत संगीत मानिसको अभिन्न साथी हो जस्तो लाग्छ ।
संगीतमा कलाकारहरूले सन्तोष गर्ने ठाउँ कति छ ?
गीत संगीतमा सन्तोषको कुरा कलाकारको मिहेनत, धैर्यता, लगावमा भर पर्छ । कमाई अनुसार रम्न सके सन्तुष्ट हुने ठाउँ प्रशस्तै छ ।
संगीत विधा नै रोज्नुको कारण ?
भाका र भाषा जुनसुकै भएपनि संगीतधुन मन नपर्ने सायदै होलान् । पशुपन्छी त संगीतमा रम्छन् भने हामी चेतनशील प्राणी भएको नाताले पनि संगीत मन पराउनु स्वभाविक हो । त्यसैले संगीतको संसारमा अर्कै मज्जा छ । त्यही मज्जामा रमाउन चाहेको हुँ ।
स्रष्टा र उत्पादकबीच भैरहने विवादको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो राम्रो पक्ष होइन । हाम्रो सानो आन्तरिक बजार र न्यून अन्तर्राष्ट्रिय बजारको घेराभित्र अस्तित्वको संरक्षणका लागि संघर्षरत नेपाली संगीत उद्योगलाई बौद्धिक सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्नेहरुले स्रष्टाको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेर धरमराउँदोे बनाएका छन् । यस्तो खेलबाडको क्रम आधुनिक युगमा रोकिनुको साटो उल्टै बढ्दो छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन ०५९ र नियमावली ०६१ ले व्यावहारिकरूपमा श्रष्टा र सम्बन्धित पक्षलार्ई न्यायोचित संरक्षण दिन सकिरहेको अवस्था छैन । यो सोचनीय विषय हो ।
यस्तो कार्यबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ?
बास्तबिक स्रष्टालाई त प्रभावित पार्छ नै उद्योगका आन्तरिक बजारमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत प्रभावित हुन पुग्छ । चोरीका विभिन्न माध्यम हुँदै नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपाली समुदायबीच यसको अनाधिकृत व्यापार भइरहेको पाइन्छ । तर, यसबाट स्रष्टाहरू कति लाभान्वित हुन सके भन्ने अहम् प्रश्न हो । त्यसैले आफ्नै सिर्जनाको चोरी हुँदा बास्तबिक हकवालाले नै आवश्यकीय निगरानीमा चासो नदेखाउने हो भने यस्तो समस्या दोहरिरहने कुरामा कुनै शंका छैन ।
एउटा गायकको के नै योजना हुन्छ, निरन्तर गीतसंगीतको क्षेत्रमा लागेर स्रोता रुचीको गीतसंगीत पस्कने नै हो । महामारीको यो अवस्थामा पनि मोफसलमा रहेर गीतसंगीतमा रमाई रहेका मलाई सम्झेर आफ्नो कुरा स्रोता, दर्शकमाझ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक मध्यान्ह परिवारमा नमन् ।
तीज पर्व नजिकिएसँगै तीज गीत धामाधम सार्वजनिक हुँदै
रेशम अधिकारी अशोक/मध्यान्ह
काठमाडौं : हिन्दु नेपाली नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीज पर्व नजिकिएसँगै तीज गीत धामाधम सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । कति गीत युट्युबको ट्रेन्डिनमा आएका छन् भने कति गीत यसै हराएका पनि छन् ।
गीतलाई चर्चामा ल्याउनका लागि कति निर्देशकहरुले चर्चामा आएका कलाकारहरुलाई म्युजिक भिडियोमा ल्याउने गरेको प्रशस्त उदाहरण पनि छन् । पछिल्लो समय नेपाली मौलिक तीज गीत कम मात्र सुन्न पाइन्छ । तीज गीतको नाममा छाडा र सुन्न अनि हेर्न समेत नसकिने खाल्का म्युजिक भिडियो र गीतहरु बजारमा आइरहँदा हाम्रो लोक संस्कृत लोप हुने डर समेत बढेको छ ।
यसै बीच गायन क्षेत्रमा आफ्नो भविस्य बनाउन नेपाली संङीतिक बजारमा प्रवेश गरेका गायक युनिस अधिकारीले तीज गीत 'पुर्वै धरान' बजारमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
सुदिप सुवेदीको शब्द संगीत रहेको गीत ग्राड प्रोड्क्सन प्रा.लि.को तीज कोशेलीको रुपमा बजारमा आएको हो । उक्त गीतमा गायक युनिस अधिकारी, सुदिप सुवेदी, क्ल्पु अर्याल र चर्चित गायीका सुनिता बुढा क्षेत्रीको स्वर रहेको छ ।
भिडियोलाई बिक्की परिवारले निर्देशन, कृष्ण केसी सम्पादन तथा छायांकन भने अहिलेका चर्चित फिल्म छायांकार सौगात महतले गरेका छन् । गीतमा मुकुन्द सुवेदी र जुनु सुधौलिको उत्कृष्ट अभिनय देख्न सकिन्छ । तीज गीतलाई आर्टिष्ट म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिन्छ ।
बोस्टर अवार्डबाट पत्रकार बराल सम्मानित
काठमाडौं : बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड –२०२१ बाट पत्रकार गोकर्ण बराल सम्मानित भएका छन् । गत शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहबीच अवार्ड कार्यक्रममा बराललाई सम्मान गरिएको हो ।
तेश्रो संस्करणमा आयोजित समारोहका प्रमुख अतिथी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ख्याति कमाएका कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी, समाजसेवी लगायतलाई अवार्ड प्रदान गरेका थिए ।
बराललाई नेपाली पत्रकारिता विधामा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तररुपमा उत्कृष्ट सेवा गरे बापत पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा पत्रकारिताको माध्यमबाट नेपाली चलचित्र, नाटक, गीतसंगीत लगायतका कला संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको भन्दै पत्रकार बरालको चर्चा गरिएको थियो । प्रमुख अतिथी डा. महतले उत्कृष्ट सेवा गरेका व्यक्तित्वहरुको सम्मान गर्ने संस्थागत परिपाटीबाट देशको थप गरिमा बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा लोकप्रिय लेखक भिष्मराज फुलारा, शीर्ष गायन कलाकार शिव परियार, द्वन्द्व निर्देशक हिमाल केसी, चर्चित हास्य कलाकार शेखर खनाल, म्युजिक भिडियो निर्देशक देवेन्द्र पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
यसअघि विदेशमा आयोजना गरिँदै आएको अवार्ड कार्यक्रम यस वर्ष कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नेपाली भूमिमा आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ ।
काठमाडौं : नेपाली मेकअपको क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै गइरहेकी सुनिता मरासिनीलाई उत्कृष्ट मेकअप आर्टिष्टको अवार्ड प्रदान गरिएको छ । बैंकिङ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूट (बीएमटीआई)को प्रस्तुतिमा शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्ड समारोहमा उनलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।
बोस्टर मिडियाको आयोजना र क्यापिटल इन्टरटेनमेन्टको इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा सम्पन्न भएको अवार्ड समारोहमा मरासिनीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी डा. रामशरण महत र अन्य विशिष्ट अतिथीहरूले अवार्ड, प्रमाण पत्र, माला र खादा प्रदान गरेका थिए ।
सुनिता मेकअप आर्टिष्टका रुपमा नेपालमा अग्रपंक्तिमा रहेका नाम हो । उनको मेकअप कलाले सर्वत्र चर्चा पाउने गर्दछ । उनी विशिष्ट मेकअप आर्टिष्टका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएकी छन् ।
बोस्टर मिडियाको आयोजनामा भएको अवार्डमा क्यापिटल इन्टरटेनमेन्टले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेको थियो भने टीभी इको वान, म्यूजिक खबर र रेडियो भ्वाइस अफ नेपालको मिडिया सहकार्य रहेको थियो ।
गीत संगीत तथा अन्य विभिन्न विधामा ४२ भन्दा बढी सर्जजकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । बोस्टर मिडियाका सल्लाहकार भवानीप्रसाद पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको अवार्ड सामारोहमा साहित्यकार राधेश्याम लेकाली, राजु श्रेष्ठ व्यवसायी, चलचित्र कलाकार संघका उपाध्यक्ष तथा बरिष्ठ निर्देशक मोहन निरौला, वरिष्ठ हास्य कलाकार लय संग्रौला, वरिष्ठ हास्य कलाकार उत्तम केसी, चलचित्र निर्देशक जनक खकुरेल, व्यवसायी तथा समाजसेवी राजु श्रेष्ठ, व्यवसायी तथा समाजसेवी प्रकाश श्रेष्ठलगायतले अवार्ड तथा सम्मान प्रदान गरेका थिए ।
बोस्टर मिडियाले विगत आठ वषदेखि अनलाइन न्युज पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान तथा अवार्ड प्रदान गर्दै आइरको छ । अवार्ड समारोहमा एञ्जल र आशिकाले स्वागत नृत्य गरेका थिए भने कार्यक्रम संयोजक माधव निर्दोषले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
समारोहमा कोभिड हिरो सम्मानबाट लायन्स क्लव अफ नेपाल काठमाडौं आर्शिर्वाद तथा लोटस फेसन मेट्रोकी अध्यक्ष कमला श्रेष्ठ, लायन्स क्लव आफ काठमाडौं आर्शिवाद तथा आकाश भैरव फिटनेस सेन्टरकी प्रथम उपाध्यक्ष शुशिला श्रेष्ठ, हाइड एण्ड सिक किन्डर गार्डेन सानोभर्‍याङका प्रधानाध्यापक कुमुद छत्कुली भट्ट, र किमोलुगं फाउण्डेशन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष वाङ्चुक राप्तेन लामालाई सम्मानित गरिएको थियो ।
यस्तै विधागत सम्मानमा गायिका विद्या तिवारी, लेखक, पत्रकार तथा गीतकार गीता अधिकारी, र्‍याप मोडल एन्जल श्रेष्ठ, गायक/मोडल दिपेन्द्र सोनाम, समाजसेवी देवीमाया आचर्य, मेकअप आर्टिष्ट गीता उप्रेती, लोकदोहोरी गायिका सीता सिदाली मगर, पप/आधुनिक गायिका पारु रञ्जीत, पप/आधुनिक गायिका छुनु गुरुङ, इभेन्ट म्यानेजर नवराज देउवा, स्वतन्त्र पत्रकार गोकर्ण बराल, पत्रकार राज लुइँटेल, विनर अफ मिस नेक्स्ट सुपर स्टार सोनिया राज्यलक्ष्मी शाही ठकुरीलाई प्रदान गरिएको थियो । उनीहरुलाई सम्मानपत्र, दोसल्ला, खादा तथा मालाले सम्मान गरिएको थियो ।
बरिष्ठ साउण्ड रेकर्डिष्ट किशोर थापा तेस्रो बोस्टर इन्टरटेन्मेन्ट अवार्डको निर्णयकमा रहेका छन् ।
अवार्ड समारोहमा बरिष्ठ रेकर्डिष्ट थापालाई प्रमुख अतिथी पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निर्णयकको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । थापा नेपालका साउण्ड रेकर्डिष्टमा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो ।
उनले थुप्रै गीतमा साउण्ड रकेर्डिष्टको कार्य गरेका छन् । उनले रेकर्डिष्टका रुपमा काम गरेको धेरै गीत चर्चित तथा लोकप्रिय रहेका छन् । सो अवसरमा गीत संगीत तथा अन्य विभिन्न विधामा ४२ भन्दा बढी सर्जजकलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
‘निर्देशकको जस्तो सामाजिक दायित्व अरूमा कहाँ होला’
चलचित्र निर्देशनको क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै गर्दा अमेरिका पुगेका निर्देशक सुमन दाहाल अमेरिकामा पनि निर्देशनमा व्यस्त रहने गरेका छन् । अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली चलचित्र, गीतसंगीतलाई माया गर्दै आइरहेका दाहालले आधा दर्जन चलचित्र र दर्जन बढी म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका छन् । अमेरिका बसेर पनि आफ्नो नेपाल, आफ्नो मौलिकता बिर्सन नसकेको भन्दै आफैंले निर्देशन गरेको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत ‘मलाई मेरै नेपालको माया छ’ बोलको गीतलाई केही समय पहिले युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए भने हालै ‘हेर्दा हेर्दै’ बोलको भिडियो ल्याएका छन् । अमेरिकामा ‘लेक्सिनटन दोहरी’ कार्यक्रमका प्रस्तोता समेत रहेका दाहाल नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । पागल पन, इलाका, जीवन मृत्यु, मनपरेपछि, अल्पबिराम, मान्छेको माया, पाइला, हलचल, नो स्मोकिङ आदि चलचित्रमा काम गरेका निर्देशक सुमन दाहालले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
विदेशमा भएका कारण प्रत्यक्ष चलचित्रमा काम गर्न सकिरहेको छैन, डेढ दर्जन भिडियो विदेश बसाइको क्रममै गरियो र गरिनैै रहेको छु । चलचित्रकर्मी र चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छु ।
पत्रकारिता गर्दा गर्दै यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?
म गाउँमा हुँदा देखि नै आफ्नो मनको विचार र सोच धेरै मानिसहरूमा पुर्‍याउन चाहन्थें । सबै मानिसहरूलाई मेरो मनको भावना कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरा दिमागमा घुमिरहेको थियो । जब म स्नातक तहको अध्ययान गर्न काठमाडौं आएँ, आरआर क्याम्पसमा ब्याचलर अफ आर्ट्सका साथमा अप्सनल विषय चाहिँ पत्रकारिता रोजेर पढें, साथमा सुमन खरेलले संचालन गर्नुभएको स्मारिका मिडिया सर्भिसमा रेडियो, टेलिभिजन जर्नालिजमको कोर्ष पनि गरें, मेरो चाहनालाई अगाडि बडाउने उत्तम बाटो नै पत्रकारिता जस्तो महसुस भयो । त्यो समय चलचित्र खेल्ने भूत पनि अली अली चढिरहेको नै थियो । दिनेश डिसी दाजुले निर्देशन गर्ने, शम्भूजित बासकोटाले निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिएको चलचित्र ‘जाउँ हिँड पोखरा’ मा अडिसन पास पनि भएको थिएँ, चलचित्र बन्न सकेन । जब मेरो ब्याचलर तेस्रो वर्षको कक्षा अन्तिम अन्तिम हुँदै थियो म क्याम्पस जाने आउने बाटोमा हालका चलचित्र निर्देशक प्रमोद भण्डारीको फोटो स्टुडियो थियो । उहाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएका कारण म उहाँकोमा यसो छिर्ने पनि गर्थें, उहाँले टेलीचलचित्र निर्देशनको तयारी गरिरहनुभएको थियो । मेरो कलाकार भएर खेल्ने इच्छा उहाँलाई थाहा थियो । कथा सुनाउनुहुन्थ्यो । कथामा टर्निङ पोइन्टको कुरा र डाइलग स्ट्र«ङ राम्रो नभएको ठाउँहरूमा म लजिकलरूपले आफ्नो लजिक राख्थें उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो । मेरो अन्तिम परीक्षा आइरहेको थियो । सबै कुरा प्रमोद दाइलाई थाहा थियो । परीक्षा सकेपछि कुनै पत्रिकामा लेख्ने, कुनै एफएममा कार्यक्रम गर्ने सोच बनाइरहेको थिएँ । जब अन्तिम दिनको परीक्षा सकेर घरमा आएर भात खाँदै थिएँ, प्रमोद दाइ आउनुभयो र सुमन परीक्षा सकियो हैन भन्नुभयो, मैले सकियो दाइ भनें, उहाँले ल खाना खाउ र मसँग हिँड भन्नुभयो । म हतार हतार खाना सकेर तयार भएँ, मलाई लागेको थियो फिल्म खेल्न पाइने भयो । हामी घरबाट निस्किएर अलिपर पुगेपछि मैले सोधें दाइ फिल्म कहिलेबाट गर्ने ? उहाँले भन्नुभयो कि पर्सीबाट सुटिङ । म पनि छु नी है ? उहाँले तिमीले अब खेल्ने पनि मुख्य सहायक निर्देशन पनि गर्ने भन्नुभयो । केही नै थाहा छैन कसरी गर्ने भनें मैले । तिम्रो दिमाग राम्रो चल्छ तिमी छिट्टै जान्ने हुन्छौ भन्नुभयो उहाँले । त्यसपछि ‘नयाँ नेपाल’ विद्रोह टेलीचलचित्र लगातार गरें उहाँसँग, पछि नेपाली कथानक चलचित्र पागल पन र इलाका पनि उहाँसँगै गरें ।
वास्तवमा निर्देशकको जिम्मेवारी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ ?
निर्देशकको जिम्मेवारी निकै ठूलो छ । कुनै चलचित्र बनाउँदा यदि दर्शकहरूमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू राम्रोसँग अध्ययन नगरी गरियो भने जनमानसमा निकै ठूलो असर हुन्छ । सही विषयवस्तु, कलाकारको चरित्र, परिवेश अनुसार भेषभुषा, भाषा, धर्म संस्कार, संस्कृति सबैको राम्रो अध्ययनले मात्रै सही जिम्मेवारी वहन हुन्छ । नेपाल विभिन्न जातजाती बसोबास गरेको देश हो । हरेक जातजातीको आ–आफ्नो कला, भेषभुषा, रिती रिवाज धर्म संस्कृति चाडपर्वहरू छन् । यी कुरा बाहेक कुनै पनि क्षेत्र, परिवेश नबुझी चलचित्र बनाइयो भने भ्रममात्र हुन्छ, त्यसैले समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्ने, पुराना मान्यताहरू, भाषाको सही प्रयोग, भेषभुषाको सही प्रयोग, धर्म संस्कार संस्कृतिहरू नयाँ पुस्तामा पुर्‍याउन सक्ने प्रभावकारी माध्यम चलचित्र भएका कारण निर्देशकको जस्तो सामाजिक दायित्व अरूमा कहाँ होला । समाजको सही मेरूदण्डीय भूमिका हुन जरूरी छ ।
फिचर्स फिल्मको निर्देशक म्युजिक भिडियोमा देखिनुको कारण ?
अहिले कोरोना संक्रमणका कारण एक वर्षयता चलचित्र बानाउने, चलाउने माहोल छैन, भिडियो युट्युब मार्फत घरघर हातहातमा पुग्ने हुँदा आफ्नो कामको निरन्तरताको एक पाटो यो भएकोले भिडियो गरेको हो । अर्को कुरा अमेरिका आएर यहाँ नै चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्था तत्काललाई छैन । भिडियो बनाउन सजिलो छ । सबै दर्शक सामू पुर्‍याउन पनि सजिलो छ ।
एउटा फिल्म सफल हुन के–के कुरामा ध्यमा दिनुपर्छ ?
विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन, पात्र परिवेश, पहिरनको सही छनोट, आवश्यक लगानी र सामग्रीको व्यावस्थापन, समाजको चासो र खोजीको कथा नै हो सफलताको कडी ।
निर्देशनको मैदानमा आफुलाई कहाँ पाउनुहुन्छ ?
म निर्देशकका हिसावले फुच्चे, सिक्दै गरेको सिकरू हुँ । चलचित्रका संघसंस्थाको नेतृत्वका हिसावले निकै सफल हुँ जस्तो लाग्छ ।
भविष्यका लागि के सोच्नु भएको छ ?
चलचित्र निर्माण/निर्देशन नै हो मेरो काम, अडियो भिडियोमै जीवन बित्छ ।
अमेरिकामा रहनुुभएको पनि वर्षौ बितिसकेको छ, हलिउड र कलिउडबीच चलचित्र निर्माणमा के भिन्नता पाउनु भयो ?
तुलना नै गर्न सकिन्न जस्तो लाग्छ । यीनीहरूको लगानी, मेहनत, अध्ययन, लगाव सबै हेर्दा हामी त चलचित्रमा थिरिथिरि गरेको जस्तो लाग्छ ।
अमेरिकामा नेपाली चलचित्र प्रदर्शनको सजिलो उपाय के हुन सक्छ र तपाईंको तर्फबाट कस्तो पहल भैरहेको छ ?
म अमेरिका आएपछि यहाँ कसरी नेपाली चलचित्र चलाउन सकिन्छ भनेर निकै स्टेटहरू गएँ, छलफल गरें । नेपालीले मात्र हेर्ने त्यो पनि शनिबार र आइतबारमात्र बिदा हुने भएकाले हलमा चलाउन निकै ठूलो रकम तिर्नुपर्ने जुन पैसा उठाउन सकिँदैन रहेछ । शनिबार र आइतबार बाहेक अरूदिन हल सस्तो हुन्छ तर नेपाली दर्शकको बिदा हुँदैन । निकै अप्ठेरो छ । नेपाल जस्तै यहाँ हलमै रिलिज गरौं भन्दा हाम्रो लो बजेटमा बनेको चलचित्रले विदेशी चलचित्रसँग कम्पिटिशन गर्न नसक्ने, हाम्रो भाषा बोल्ने बुझ्ने दर्शक कम भएका कारण तत्काल असम्भव देखें ।
अमेरिकामा पनि ‘लेक्सिनटन दोहरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसको उद्देश्य चाहिँ के हो ?
अमेरिका आए पनि कला क्षेत्रको मान्छे त्यो पनि निकै सक्रियहरू भित्र म पनि पर्छु । यहाँ बसिसकेपछि यहाँ सबै व्यावसायिक कलाक्षेत्रका मानिसहरू नभएका कारण एक दुई म्युजिक भिडियोले मात्र यहाँ अडियो भिडियोको माहोल बन्दैन, दोहोरी हाम्रो माटोको सुगन्ध बोकेको गीत हो । त्यसैले सबैले अभिरूचीका साथ हेर्नेसुन्ने हुँदा एक किसिमको माहोल सिर्जना हुन्छ । र, आपसमा भेटघाट हुने थलो पनि हो ।
अधिकांश कलाकर्मीहरुले अमेरिका सपना देख्नुको कारण के होला ?
लामो समय चलचित्रमा काम गर्दा संघसंस्थामा काम गर्दा के देखियो भने काम गरिरहँदा त ठिक ठिकै हुन्छ, केही कारणवस काम गर्न सकिएन भने न सोसल सेक्युरिटी पाइयो, न हेल्थ प्रोटेक्सन नै पाइयो, निकैको बिजोग अवस्थाले सचेत बनायो । यहाँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ तर बिजोग नै चाहिँ हुँदैन ।
नेपाल आएर पुनः निर्देशनमा सक्रिय हुने सोच बनाउनु भएको छ ?
मेरो लाइफभरिको पेशा नै चलचित्र हो । यो समय एक चलचित्र सुटिङ थियो मेरो कोरोनाले माहोल बिग्रियो । परिस्थिति सुध्रियसँगै काम गर्छु ।
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा भएयता चलचित्र क्षेत्रमा आश्रित कलाकार, प्राविधिकहरु लामो समयदेखि बेरोजगार बनेका छन्, उनीहरुको राहतका लागि केही पहल गर्नु भएको छ कि ?
यहाँ हामीले चलचित्र निर्देशक र केही मन मिल्ने चलचित्रकर्मी मिलेर एक ग्रुप बनाएका छौं । नेपालमा अप्ठेरोमा परेका चलचित्रकर्मीहरूलाई नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज मार्फत सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली चलचित्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अब केही समयलाई परिस्थिति अनुकुल छैन । धैर्यताको आवश्यकता छ ।
सबै चलचित्रकर्मी साथीहरूमा नआत्तिन आग्रह गर्दछु । के सकिन्छ गर्दै गरौं युट्युवबाट, टिभीबाट काम निरन्तर गरौं । परिस्थिति अनुकुल हुने बितिकै चलचित्र निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलमा उत्कृष्ट २० छानिए
दोहा, कतार : ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल–२०२१ को पहिलो संस्करणमा विश्वका विभिन्न देशबाट भाग लिएका प्रतिभाहरु मध्येबाट उत्कृष्ट २० छानिएका छन् । ‘नेपाली कला संस्कृति संरक्षण र पहिचान, एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान’ भन्ने नारा लिएर आयोजना गरिएको ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल सेकेन्ड जेनेरेसन सिजन–१ को गाला राउन्डको दोस्रो चरणबाट उत्कृष्ट २० जना छनोट भएका हुन् ।
उत्कृष्ट २० मा युवराज गुरुङ (क्यानडा), बीबी मल्ल ठकुरी (कुवेत), नरेन्द्र मल्ल (कतार), सन्देश गुरुङ (अमेरिका), गोविन्द गुरुङ (कतार), आकाश न्यौपाने (जापान), कविता आरबिएम (युएई), वामदेव भाट (बहराइन), सुरेन घताङ ‘शिव’ (कोरिया), किशोर लम्साल (कतार) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, कपिल पाइजा पुन मगर (आयरल्याण्ड), सागर विश्व सेञ्चुरी (कुबेत), दीपेश सिग्देल (नर्वे), राधिकाकुमारी गोले (कोरिया), रामचन्द्र राई (कतार), अमित बिष्ट (युएई), कृष्ण खबास (युएई), प्रतिक सिडब्ल्यूए परियार (बहराइन), सतिश थापा (कतार) र रेशु स्याङ्दान (बहराइन) रहेका छन् ।
एनआरएनए मध्यपूर्व युवा संयोजक राज रेग्मीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न गाला राउन्डको दोस्रो चरणमा २५ जना प्रतिस्पर्धीले प्रस्तुति दिएका थिए ।रेग्मीका अनुसार निर्णायकको मत ६० प्रतिशत र भोटिङ मार्फत प्राप्त ४० प्रतिशत मतका आधारमा प्रतिस्पर्धी छानिने गरेको बताए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाली भाषा, कला र संस्कृति असाध्यै धनी रहेको बताउँदै यसलाई विश्वभरि फैलाउनका लागि दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मध्यपूर्व क्षेत्रीय यूवा समतिले आयोजना गरेको ‘यस कार्यक्रम डिजिटल अडिसन, ओपनिङ राउन्डको अन्तरा, सारेगम र पियानो राउन्ड पार गर्दै छनोट भएका २५ जनामध्येबाट ‘गाला राउन्ड’को दोस्रो चरणमा २० जना छानिएका हुन् । निर्णायकहरू गायक उदय सोताङ र विजय लामा तथा गायिका प्राश्ना शाक्य र सुनिता दुलाल रहेका छन् ।
ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडलका विजेताले ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् भने दोस्रो पुरस्कार चार लाख रुपैयाँ, तेस्रो पुरस्कार दुई लाख रुपैयाँ, चौथो पुरस्कार एक लाख रुपैयाँ र पाँचौं पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाउने ५ जना प्रतियोगीहरूलाई गीति एल्बममा गाउने अवसर प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।